Ho an'ny orinasa mpanamboatra fantson-drano, Sina ho an'ireo mpanamboatra fantson-drano
Tady mitazona paompy nandrisika
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny tadin-tsarimihetsika fantsom-pako dia nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao, indrindra any Amerika Avaratra. Ary nopetahany takela-barahina izy ireo miaraka amina lavaka 1/4 ″ sy 3/16 ″.
UPC Plastika 180 ° fampiatoana fampiatoana
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny clamp fampiatoana 180 ° amin'ny plastika dia neken'ny UPC. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, ny taolan-tehezany dia mamela ny fantsom-pivezivezy hidina mora kokoa sy mangina kokoa rehefa manitatra sy mifintina ny fantsona.
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny fantsom-pandrika vita amin'ny fantsom-pako dia nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao, indrindra any Amerika Avaratra. Ary zinc dia nopetahany lavaka 3/16 struct rafitra.
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny fantsona fantsom-plastika dia ekena UPC. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, ny taolan-tehezany dia mamela ny fantsom-pivezivezy hidina mora kokoa sy mangina kokoa rehefa manitatra sy mifintina ny fantsona.
Tady fantsom-pohy plastika
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny tadiny mihantona fantsom-plastika dia noforonina tamin'ny fomba haingana sy lafo vidy hanantonana ny fantsom-pohy amin'ny soavaly na rafter. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, vita amin'ny polyethylene izy ireo.
Milford Hanger dia nahantona tamin'ny fantsom-by avy amin'ny zavatra iray
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny hangantonay Milford dia ampiasaina hanantonana ny fantsom-by amin'ny zavatra iray. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra.